Ukudabuka kwenhliziyo okwesabekayo kulezi zithandani | Bezzia
UMaria Jose Roldan | | Ubudlelwano
Ukuphuka kwenhliziyo akuyona isidlo sokunambitheka okuhle kunoma ngubani futhi Kuwukwesaba okukhulu ukuthi othandekayo uzobuqeda ubuhlobo, ngaphandle kokukwazi ukwenza lutho ngakho. Akusona isimo esilula, ikakhulukazi uma uqhubeka uzwela okuthile ngalowo muntu. Kungenzeka futhi ukuthi ubuhlungu benhliziyo buhlupheke wedwa futhi angabe esazwela lutho ngomunye umuntu. Ebhekene nokufika kwenhliziyo ebuhlungu, kusala kuphela ukwamukela lesi simo nokwakha kabusha impilo noma ukugcina ithemba ukuze konke kubuyele esimweni obekuso phambilini.
Abantu abaningi banqikaza ukubona iqiniso noma kungaluleki, ngoba kungcono kakhulu ukwamukela amaqiniso bese uzama ukuqhubekela phambili usuku nosuku. Esihlokweni esilandelayo sizokhuluma nawe ukuthi kusho ukuthini ukudabuka kwenhliziyo kumuntu nokuthi yini okufanele yenziwe ngakho.
1 Umuzwa owesabekayo wokudabuka kwenhliziyo
2 Uthando lwangempela luyinkimbinkimbi futhi lunzima
Umuzwa owesabekayo wokudabuka kwenhliziyo
Akekho othanda ukuzwa umuzwa wobuhlungu benhliziyo enyameni yakhe, ikakhulukazi uma kuthiwe uthando alufunwa futhi omunye umuntu akazizwa ngendlela efanayo. Akulula nakancane ukucabanga ukuthi uthando nomlingani wakho bekuyinto enhle, kanti empeleni ibingenalutho futhi ingenazo zonke izinhlobo zemizwa.
Njengoba bebhekene nokufika kwenhliziyo ebuhlungu, abantu abaningi abasamukeli lesi simo bagcina sebakha umhlaba ofanayo, ogcwele iphupho lapho uthando olubuyisanayo lubamba iqhaza elibalulekile. Isikhathi senjabulo nothando lweqiniso senziwa nalezi zithandani ezisiza ukufihla ukuthi yini eyiqiniso elibuhlungu. Lokhu akucebisi nakancane, ngoba iqiniso lihlukile futhi umonakalo wokudabuka kwenhliziyo ungaba mkhulu kakhulu. Akunakusiza ukudala umhlaba ofanayo lapho ukuphuka kwenhliziyo kufihlwe ngokuphelele.
Uthando lwangempela luyinkimbinkimbi futhi lunzima
Thanda futhi uthandwe ngokweqiniso, Akulula nakancane futhi kwabanye abantu kungaba yinkimbinkimbi impela. Kodwa-ke, ngokungafani nokwenzeka ngobuhlungu benhliziyo, uthando lweqiniso lungokoqobo futhi akudingekile ukuthi uphendukele emcabangweni lapho ukujabulela. Uthando lweqiniso lungaba yi-vertigo yangempela kubantu abaningi kwazise bakhungathekiswe yileli qiniso, bakhetha ukungabi naluthando nokuhlala ezweni elingesilo elangempela, eligcwele iphupho elihlanzekile.
Kunoma yibuphi ubuhlobo obufanele usawoti wabo, uthando kufanele lube lweqiniso futhi lube yiqiniso ngoba ngale ndlela, kukhona inhlalakahle ngaphakathi kombhangqwana ebasiza ukuba baqine futhi bahlale ngokuhamba kwesikhathi. Ubuhlungu benhliziyo abusizi ukuthi ubudlelwano buqine, into ebalulekile kunoma yimuphi umbhangqwana.
Ngamafuphi, zimbalwa izinto ezilukhuni kule mpilo njengokuthandana nothile nokuthi kuvele ukuqaqamba kwenhliziyo okwesabekayo. Kungumuzwa omnyama ikakhulukazi kumuntu osothandweni noma ozwe okuthile ngomunye umuntu. Ubhekene nalokhu, akukho okunye ngaphandle kokwamukela iqiniso nokuzama ukuthola uthando lweqiniso komunye umuntu.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Psychology nezithandani » Ubudlelwano » Usizi olwesabekayo kulezi zithandani
Veza izimonyo zokubuyela emsebenzini